उज्वललाई रविन्द्रको प्रेमपत्र- एकपटक भेटेर प्रेम र भ्रमका कुरा गर्ने मन छ
scheduleबिहिवार फाल्गुन ८ गते, २०७६
छुट्टिएका मित्रहरूलाई प्रेमपत्र- देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुट चाहिन्छ
हामीबीच राजनीतिक प्रेम विवाह भएको थियो । तर हामीले अरूले गरिदिएको बखानको भरमा प्रभावित भएर एक-अर्कालाई राम्ररी नचिनिकनै विवाह गरेछौं । विवाह लामो समय टिक्न सकेन । तर यो बीचमा हामीले एकअर्काबाट धेरै सिक्यौं ।
खासगरी गत आम निर्वाचनपछिको एक वर्षमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा विद्यमान ‘अत्यन्तै प्रतिकूलता’का बीच पनि हामीले ठूलै उपलब्धि हासिल गर्‍यौं । आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा लेरायौं । सञ्चार माध्यमका कयौं बहसहरू हाम्रो प्रतिनिधित्वबिना अपुरो देखिन थाले । राजनीतिक बहसहरूमा अबको विकल्प हामी नैं हौं भन्ने निष्कर्षहरु निकालिन थाले । देशभरी संगठनहरु विस्तार हुन थाले ।
हामीले ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’को दर्शनलाई आम सर्वसाधारणसम्म पुर्‍यायौं, शिक्षा र स्वास्थ मूलरूपमा राज्यको दायित्व हो भन्ने धारणालाई स्थापित गर्‍यौं । सुसंस्कृत र मूल्यमान्यतायुक्त पार्टी नबनी देश बन्दैन भन्ने विश्वास जगायौं । आम सर्वसाधारणले हामीलाई पत्याए र साथ पनि दिए ।
तर लक्ष्यमा समानता भएरमात्र नपुग्ने रहेछ । लक्ष्यमा पुग्ने विचार र व्यवहारमा पनि समानता चाहिने रहेछ । दूर्भाग्यवश, लक्ष्य प्राप्त गर्ने हाम्रा वैचारिक चक्र र व्यवहारमा यति धेरै अन्तर रहेछन् कि हामीले जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि ती एकवद्ध हुने सम्भावनै रहेनछ । त्यसैले तपाईंहरू अनायासै घर छोडेर जानुभयो ।
सामाजिकरुपमा असल र भद्र देखिने हामीहरू समेत गलत निर्देशकहरुका कारण राजनीतिक मञ्चमा फरक पात्र बन्न सक्दा रहेछौं भन्ने अनुभूति भएको छ । हामी छुट्टिएको देखेर यहाँ रमाउनेहरु धेरै छन् । मन दुःखाउनेहरु अझ धेरै छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, हामीबीच अभियानकेन्द्रित समूह मात्र बन्ने की राष्ट्रिय राजनीतिमा सु-संस्कृत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर देश रूपान्तरण गर्ने पार्टी बनाउने भन्नेमा मतभेद थियो । त्यो मतभेद छलफलबाट टुङ्गिन नसकिने तहको थिएन । तर तपाईंहरू जानुभयो र गएदेखि नै आरोपै आरोप लगाउनुभयो ।
मलाई ती पीडादायी आरोपहरूको भन्दा पनि हाम्रो सामूहिक लक्ष्य र त्यसमा पुग्नसक्ने आघातका बारे चिन्ता छ । हाम्रै जीवनकालमा यो देशको रूपान्तरण नहेरी मर्नुपर्ला भन्ने चिन्ता छ । पुष ३० गतेका लागि तय गरिएको हाम्रो भेटमा आत्मै पखालेर मनका पीडा पोखुँला भन्ने र दिनढाडै व्यक्तिगतरूमा मेरो र संगठनात्मकरूपमा पार्टीको ढाडमा हानिएको छुरीले पारेको घाउमा मल्हम लगाउँला भन्ने सोच थियो । तर अलि ढिलोसम्म पर्खिएछु, तपाईंहरू थाहै नदिइ हिँडि हाल्नुभयो ।
अब एकपल्ट भेटेर प्रेम र भ्रमका कुरा गर्ने मन छ । लक्ष्य बोकेरमात्र नहुने रहेछ, लक्ष्यमा पुग्ने शैलि र चरित्रका बारे गफ गर्ने मन छ। जीवन धेरै बाँकी छ, यात्रा लामो छ। तर देश रूपान्तरणको गन्तव्य भने मैले बदलिँदो परिवेशका कारण झन, झन छोटो देख्न थालेको छु। त्यो नजिकै देखिन थालेको गन्तव्यलाई म विगार्ने पक्षमा छैन। सिँगो देश बनाउन साऽऽऽनो मुटु लिएर हुन्न । देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुट चाहिन्छ । सँगसँगै इमानदारी, क्षमता, समूहमा काम गर्ने ढंग पनि चाहिन्छ । धेरै कुरा चाहिन्छ ।
दुःख छ तर कुनै आग्रह, पुर्वाग्रह, ईर्ष्या, द्वेष छैन । कहिल्यै नआओस् पनि। दुःखहरूचाहिँ कहिलेकाहिँ अभिव्यक्त हुनेछन् । त्यसमा अन्यथा नसम्झिदिनुहोला । तपाईंहरूले हालैका दिनहरुमा व्यक्त गरेका दुःखलाई पनि मैले अन्यथा लिएको छैन ।
छिटै बसेर चिया खाउँला । मिलेमा लामो समयदेखि जाने भनेर नगएको ओम आध्या रिसोर्ट जाउँला । के थाहा पुनर्मिलन भई पो हाल्छ कि । घाम भर्खर उदाएको अवस्था हो, बादल लाग्दैमा त्यसलाई अस्ताएको भन्न मिल्दैन । अन्यथा, हामीमा समयले लेराउने सुझबुझसँगै बाटो फेरी एकै ठाउँमा मिसिएछ भने सँगै यात्रा गरूँला । तपाईंहरूलाई नयाँ यात्राका लागि धेरैधेरै शुभकामना ! सबैको जय होस्, नेपालको जय होस् !
संयोजक, विवेकशील साझा पार्टी
चुनावको मुखमा दिल्लीमा ७ दिन (३)
मेरो पूर्वप्रेमिकाले के सिकून् ?
चुनावको मुखमा दिल्लीमा ७ दिन (२)
चुनावको मुखमा दिल्लीमा ७ दिन (१)
फिचर पोस्ट, ब्लग
‘बसौं माननीय सदस्य, सदनको कारबाही अगाडि बढाऔं’
ब्लग, राजनीति, विश्व
जसको सहयोग आयो, उसकै नीति लागू गर्न छाडौं
‘सभापति देउवाका गुण्डाले हामीलाई कार्यालयमै पिटे’
‘सभापति देउवा पार्टी फुटाउन चाहनुहुन्न भन्ने विश्वास छ’
किन बरालियो संघीयताको बाटो ?
आउनुहोस्- राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि लडौं
ओली–चक्रब्यूहमाथि उपेन्द्र यादवको राजनीतिक ‘अफेन्स’
‘सम्पत्ति हिनामिनामा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ’
यसकारण सुस्त भइरहेछ भारतीय अर्थतन्त्र
मैले युरोपबाट के सिकेँ ? -१
कस्तो, खलासी जस्तो !
स्वाभिमान यात्राका ८ आयाम १६ आधार
कमिशनमा डुबेका नेताको के भर ? देश नै खाइदिन सक्छन् !
‘प्रदेशका प्रमुखहरु कुनै मन्त्रीजीको पिए होइनन्’
अडियो प्रकरणबारे के भन्छन् बाँस्कोटा ?
फाइल फोटो भीमदत्तनगर, ८ फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आफूमाथि लागेको आरोपबारे काठमाडौँ...
च्याम्पियन्स लिगः एटलान्टाको सानदार जित
काठमाडौँ, ८ फाल्गुन । गएराति नै भएको अर्को च्याम्पियन्स लिग खेलमा स्पेनिस क्लब भ्यालेनसिया इटालियन क्लब एट्लान्टा ४-१ गोलले...
ऋषि बस्ताकोटी ठीक भयो भनौं कि यो बेठीक भयो उहीँ सिध्दिंदैछ जो जो नजिक भयो समृद्धिको गोठालो लागेकै थियोे ऊ पनि करोडौंको काण्ड...
काठमाडौँ, ८ फाल्गुन । मीनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसमा अध्ययनरत एक छात्रा क्याम्पसको कोठाभित्रै बलात्कृत भएकी छन् । क्याम्पसमा...
कोरोना भाइरसः एक कोरियाली शहरका बासिन्दालाई घरभित्रै बस्न भनियो
एजेन्सी, ८ फाल्गुन । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढेपछि दक्षिण कोरियाको एक शहरका बासिन्दालाई...
९ जनाको ज्यान जाने गरी हुक्का बारमा गोली चलाउने व्यक्ति आफ्नै घरमा मृत भेटिए
एजेन्सी, ८ फाल्गुन । जर्मनीको हानाउ शहरमा गोली प्रहार गरिएका भनिएका संदिग्ध व्यक्ति आफ्नै घरमा मृत फेला परेका छन् । हानाउ...
अडियो प्रकरणः सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाए
काठमाडौं, ८ फाल्गुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले...
जब रग्वी खेलाडीले श्रीमती र तीन सन्तान चढेको कारमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए
सिडनी, ८ फागुन । अष्ट्रेलियाका रग्वी खेलका एक पूर्व खेलाडीले आफ्नी श्रीमती र तीन छोराछोरीको हत्या गरेको आशङ्का प्रहरीले...